ကျနော့်ငယ်သူချင်း သက်လွင်၊ ကိုးတန်းစာမေးပွဲတွေအပြီး ကျနော်တို့ ညီအကို ကိုရင်ဝတ်ကြတော့ သူကလည်း သင်္ကန်းစီးချင်သည်။ သူ့မိဘက နွမ်းပါးလေတော့ ကျနော့် မိခင်ကြီးကပဲ ကမကထလုပ်ကာ ကိုရင်ဝတ်ပေးသည်။ နောက် ကျနော်တို့ လူထွက်တော့ သူက လောကီကို ပြန်မလာတော့ပြီ။ ရဟန်းတက်တော့လည်းး ကျနော့် မိခင်ကြီးကပဲ ရဟန်းဒကာ၊ နောက်သူ့ဆွေမျိုးထဲက တတ်နိုင်သူတွေကလည်း သိက္ခာထပ်ပေးကြသည်။ ကိုရင်ဘ၀က ရှင်သုန္ဒရသည် ဦးသုန္ဒရဖြစ်လာသည်။ ရင်းနှီးသူတွေက ဦးသုန်ဟု ခေါ်ကြသည်။ ကျနော်အိမ်နှင့် အဝေးရောက်နေစဉ် ဦးသုန် အငယ်တန်း အောင်သွားပြီ၊ ဦးသုန် အလတ်တန်းဖြေဖို့ စာသင်တိုက်ပြောင်းသွားပြီ၊ ဦးသုန် ပထမကြီး ဖြေတော့မယ်၊ စသည့် သတင်းများ စဉ်ဆက်မပြတ်ကြားနေခဲ့ရသည်။ တခါတလေ ကျနော် မိဘရပ်ထံ ပြန်ရောက်သည့်အခါ ဦးသုန်နှင့် ဆုံသည့်အခါ ငယ်သူငယ်ချင်းမို့ ရင်းရင်းနှီးနှီး စကားပြောဖြစ်ကြသည်။ သူလိုက်နေသည့် စာတွေအကြောင်းပြောပြသည်။ သူတက်နေသည့် အလုံ အောင်မင်္ဂလာ စာသင်တိုက်ကိုလည်း ကျနော်ရောက်ဘူးသည်။ သူ့ရဟန်းမိတ်ဆွေတွေနှင့် ကျနော့်ကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ သူ့ထံမှ တဆင့် ရွာမပရိယတ္တိစာသင်တိုက်နှင့် စာချဆရာတော် ဦးတိလောက အကြောင်း ကြားဘူးသည်။ ရွာမပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၏ အောင်မြင်မှုများနှင့် ဦးတိလောက ကို သူကြည်ညိုသည့် အကြောင်းများဖြစ်သည်။ နောက် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်း ဦးသုန်နှင့် တွေ့သည့်အခါ စာချဆရာတော် ဦးတိလောက သံဃာများကံဆောင်သည့် အရေးတွင် လက်မှတ်ထိုးလိုက်သည့်အတွက် နရသိမ်တွင် ၀ါဆိုနေသည့်အကြောင်း၊ တပည့်များ ပစ္စည်းလေးပါး ဒကာများက ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့သည့်အခါ ဦးတိလောက ကို တွေ့လိုသည်ဟု ပြောလျှင်မရ ဦးတင်လှ ဟု ပြောရကြောင်းများ သိရသည်။ နောက် ဆရာတော် ထောင်က လွတ်လာတော့ ဦးတိလောက ပြန်ဖြစ်ကာ စာချ ဆရာတော် အဖြစ် ကျောင်းပြန်ထိုင်သည်။ အဲဒီကျတော့မှ ဒကာအပေါင်းက အတိုးချက သိက္ခာထပ်ပွဲများ ချိမ့်ချိမ့်သဲ ကျင်းပကြသည်ဟု ဦးသုန်ပြောပြ၍ ရွာမပရိယတ္တိဆရာတော် ဦးတိလောက အကြောင်း ကျနော် ကြားဘူးနေသော်လည်း လူကိုယ်တိုင် ဖူးမြှော်ခွင့်တော့ မကြုံခဲ့ဘူးပါ။
လွန်ခဲ့သည့် ၂ ရက်လောက် ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဆောင်းပါးရှင် လွန်းနွေငြိမ်း ၏ `အ၀ီဇိဆိုတာ ကြားဖူးလား´ ဆောင်းပါးသည် ဆရာတော် ဦးတိလောကအကြောင်းကျနော်မသိသေးသည့် အချက်များ ပါသဖြင့် အထူးစိတ်ဝင်စားမိပါသည်။
ထိုနောက် ဦးတိလောကနှင့်အတူ အဖမ်းခံရသည့် ပိဋကတ် ၃ ပုံဆောင် ဦးသုမင်္ဂလ သည် အမရပူရ မဟာဂန္ဓာရုံတိုက်ထွက်ဟု သိရသည်။ အမရပူရ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင် ဇနကာဘိဝံသ ဆိုသည်မှာလည်း သာသနာတော်တွင် ထင်ရှားသူ၊ `တဘ၀ သာသနာ´၊ `တဘ၀ သံသရာ´ စာအုပ်များဖတ်ကာ ကျနော် လေးစားကြည်ညိုရသည့် ဆရာတော်ကြီး ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့သာသနာတော်တွင် ထင်ရှားသည့် ဆရာတော်များ၏ ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံများကို သိလိုသော ကျနော့်ဆန္ဒ တစိတ်တပိုင်းကို ပြည့်ဝစေသည့် ဆရာလွန်းနွေငြိမ်းအား အထူးကျေးဇူးတင်မိခြင်းနှင့်အတူ ဆရာ့ ဆောင်းပါးအားလည်း ကျနော့်ဘလော့ဂ်တွင် ထပ်ဆင့်ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။ ။
UTinHla - UploadaDocument to Scribd
Posted by Thet Oo at 9:07 PM
Thanks for sharing this. Many people like me, wouldn't know the detail otherwise.
A Burmese freind of mine living in Norway sent me this blog. I found it very interesting and shared it with some of my friends.
ဒီ အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးနဲ့ တသက်လုံး မသွားနိုင်ဘူး